UFUNA UBULUNGISWA UNINA WENGANE "ELUNYWE ENKULISA" - Ilanga News
Home Izindaba UFUNA UBULUNGISWA UNINA WENGANE “ELUNYWE ENKULISA”
IGAYA izibozi inhliziyo yowesifazane waseClermont, eThekwini othi ufice ingane yakhe enezinyanga eziwu-14, ilimele yasuka isicubu sendlebe enkulisa, nokuthe uma ebuza kothisha bathi ilunywe ngenye eneminyaka emibili. UNkz Ntombikhona Mavela (31), ongumzali ka-Ayabonga Mavela (olimele), uthi okumcika kakhulu ngale nkulisa eKwaDabeka, esikhethe ukuligodla igama layo, wukuthi kuthe uma sesenzekile isigameko mhla ka-3 kwephezulu, bangazihlupha ngokumazisa nokuthi ingane bayiphuthumise emtholampilo, ngoba bethi uma belusukumela udaba bechaza ukuthi ingane ilimalele kubona, inkulisa izovalwa.
“Ingane yami ilimale ngabo 10 ekuseni yakhala, yaze yashelwa yizwi iqaqanjelwa, ingasizwa. Uma ngibuza ukuthi bebengayiyisi ngani emtholampilo, bangitshele ukuthi bayashoda, futhi banqenile ukufona ngoba babone ukuthi ngizothuka ekubeni kuyinto encane. “Lapho basho ingane yami isuke isicubu sendlebe, izokhula izindlebe zayo zingasafani ngoba le nyama esukile ngeke iphinde ihlume,” kusho unina wengane. Uthi ngisho unina wengane elimaze umntanakhe, akazange amfonele, amazise ngesigameko ubelokhu ethi umbhalele incwadi wayifaka kubhakha wengane.
UNkz Mavela, uthi ngakusasa esehambise ingane emtholampilo, uphindele khona enkulisa wacela umhlangano nonina wengane nesigungu esilawula inkulisa. Nokuthe uma esefika unina wengane, wathi bamvimbile abasenkulisa ethi uyeza, bathi akangezi bazoyilungisa bona le ndaba. “Ngibe sengithatha elinye igxathu ngibona ukuthi udaba lwami bayalucindezela, ngavula icala emaphoyiseni ngaya nasemnyangweni wezemfundo lapho kuphethwe khona izinkulisa. Kuthe uma sebefika abomnyango, babona okuningi okungalungile. “Uthishanhloko nosihlalo wesigungu bangibizele komunye umhlangano bazongedelela, bengibuza ukuthi bengithi ngizotholani ngokufaka udaba lwengane emnyangweni? “Bangisize ngani ngoba kuyefana abangisizanga ngalutho. Bangitshela emehlweni ukuthi nesinxephezelo abebezonginika sona ngokulinyalelwa yingane yami ngeke ngisasinuka ngoba sengibaqhathe nomnyango, ngaphinda ngababophisa.
“Ngifisa ukwazi ukuthi lolu daba lwami bebezolucindezela kuze kube nini, ingane yami izo-hlala inesibazi sangunaphakade. Kumanje ingane ihlukumezekile iyalwa nje, iyaluma nayo, into ebingayenzi ingakalinyazwa. Izingane sizibalekisa kubasebenzi basezindlini abadume ngo-kuhlukumeza izingane, zizohlukumezeka ngisho nasezinkulisa, kanti sesizoze siziyise kuphi uma sixakwe wumsebenzi? “Ngifisa ngisho ungqongqoshe angenelele uma elubona udaba lwami, ingane yami ithole ubulungiswa,” esho Uthishanhloko wenkulisa owale waphetha namagama akhe, ucele ukungaphawuli ngalolu daba ethi sebekhulume kakhulu ngalo.
“Umzali sibe nemihlangano naye wafuna isinxephezelo, sakuxoxa naye lokhu, ngakho angizimisele ukuphinde ngiqale phansi ngikhulume ngalolu daba,” esho. Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uLt Colonel Nqobile Gwala, uthi icala lokulinyazwa kwengane indlebe enkulisa luphenywa ngamaphoyisa aKwaDabeka. Uthi okwamanje akekho osaboshiwe. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthi bazothumela isisebenzi somnyango esibhekekele izinkulisa,siyophenya enkulisa nakunina wengane ukuthi ngabe lesi sigameko sinjengoba kushiwo yini, bese benquma ukuthi yikuphi okuzokwenzeka uma sebephothule uphenyo.
Previous articleI-IFP nesethembiso sokulekelela abantu abaxakwe yizikhukhula
Next articleKusolwa imali yomshwalensi ebulawa kubuka umyeni